जनावरबाट कसरी सर्यो मानिसमा कोरोना भाइरस ? - Dainik Online Dainik Online
जनावरबाट कसरी सर्यो मानिसमा कोरोना भाइरस ?
प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७६, मंगलबार १ : ४८
चीनको कुनै क्षेत्रमा आकाशमा घुमिरहेको एउटा चमेरोले विष्टा जमिनतिर छाड्छ। कोरोनाका अवशेष रहेको उक्त विष्टा जङ्गली क्षेत्रमा खस्छ।
एउटा जङ्गली जनावर, सम्भवतः सालकले उक्त लिँडलाई सुँघ्यो र सालकबाटै जङ्गली अरु जनावरमा भाइरस फैलियो।
सङ्क्रमित जनावर मानिसको सम्पर्कमा आएपछि एउटा व्यक्तिमा पहिलो पटक उक्त सङ्क्रमण पैदा भयो !
त्यसपछि वाइल्ड लाइफ मार्केटका कामदारमा यो रोग फैलन थाल्यो, त्यहाँबाट नै विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोनाको जन्म भएको मानिन्छ।
वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरस जनावरबाट मानिसमा पैदा भएको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
जियोलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेएसएल)का प्रोफेसर एन्ड्रयु कनिंगम भन्छन्,''घटनाहरूको क्रम फेला पार्नु भनेको 'जासूसी कथा'को एक भाग थाहा पाउनु जस्तै छ।''
कनिंगमका अनुसार अन्य जनावर समेत कोरोनाका स्रोत हुनसक्छन् तर विशेषगरी चमेरोमानै कोरोना भाइरस बढि मात्रामा हुन्छ। लामो दूरीमा उड्ने स्तनधारी जीवहरू प्राय सबै महादेशमा पाइन्छन्। विज्ञहरूका अनुसार तिनीहरू विरलै आफै बिरामी हुने गर्दछन्।
जब बिरामी हुन्छन् तिनीहरूले चाँडै रोग फैलाउँने गर्छन्।
युनिभर्सिटी कलेज लन्डन (यूसीएल)का प्रोफेसर केट जोनासका अनुसार चमेरो रोगबाट बच्न लामो दूरीमा उड्ने तथा धेरै घटनामा आफूलाई परिवर्तन गर्ने गरेको प्रमाण छ।
उनी भन्छन्, 'जब चमेरा बिरामी पर्छन् तिनीहरु बिषाणुसँग जुधिरहेका हुन्छन, यसमा कुनै शङ्का छैन कि बिरामी चमेराहरू बाँचे तिनीहरूमा जीवाणु जीवितै हुन्छ।'
अर्का नटिङ्घम युनिभर्सिटीका प्राध्यापक जोनाथन बल भन्छन्, 'यी स्तनधारी प्राणीहरू हुन, त्यसैले उनीहरूले सीधा वा अरू कसै मार्फत मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गर्न सक्ने डर हुन्छ।'
चीनमा रहस्यमय जनावरबाट समेत कोरोना फैलिएको भनेर विश्वास गरिन्छ। ती मध्ये लोप भइसकेको सालकमा आशङ्का गरिएको छ। सालक संसारमा सबै भन्दा बढि चोरी सिकारी हुने जन्तुहरूमा पर्छ। उक्त जीव संसारबाटै लोप हुने ठाँउमा पुगेको छ।
एसियामा यसको धेरै माग छ। चीनमा यसलाई परम्परागत औषधिको निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ। धेरैले यसको मासु एकदम चासोको साथ खान्छन्।
केही मानिसले कोरोना सालकबाटै मानिसमा पैदा भएर वुहानमा फैलिएको दाबी गर्ने गरेका छन्। त्यसो भए के उक्त भाइरस मानिसमा फैलिनु अघि चमेरा र सालकमा भएको विषाणु बीच अनुवांशिकी घुलमिल भयो ?
विज्ञहरू यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्न निकै सावधानी अपनाइरहेका छन्। सालकमा गरिएको अध्ययनको पूर्ण विवरण अझै सार्वजनिक नगरिएकोले यसको पुष्टि हुन सकेको छैन।
प्राध्यापक कनिल्गम भन्छन् 'अनुसन्धानका लागि जाँच गरिएका सालकको सङ्ख्या धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ नमुना परीक्षणका लागि लिइएका सालक खोरबाट ल्याइएको हो वा जंगलबाट।'
चिनिँया सहर वुहानको समुद्री बजारमा सालक चमेरो तथा अन्य धेरै किसिमका वन्यजन्तुहरूका प्रजातिको मासु बेचिने गरिएका छन्। यस्तो ठाँउमा विषाणु एक जीव बाट अर्को जीवमा जाने मौका पाउँछ।
कनिलुगम भन्छन, “मासु बजार एक जीवबाट अर्को जीवमा जीवाणुहरू फैलाउने उत्तम ठाउँ हुन्छ। त्यहाँ मानिसहरू पनि सङ्क्रमित हुन्छन्।
चीनको वुहानमा रहेको उक्त सी फुड बजार कोरोना भाइरस फैलिएपछि बन्द भएको थियो। त्यहाँ वन्यजन्तु विभागै खडा गरेर विभिन्न जनावरहरूलाई जिउँदै तथा काटेर तिनीहरूको मासु बेचिन्थ्यो।
’द गार्डियन’ पत्रिकाको रिपोर्ट अनुसार वुहानको उक्त मार्केटमा दुम्सी, झींगा, बिच्छी, मुसा, स्याल, उँट, कोअला, सलामन्डर, कछुवा, सर्प लगायतको मासु फेला परेको थियो।
जहाँसम्म उक्त बजारमा चमेरो र सालकहरू बेचिने गरिएको भनेर सूचीबद्ध छैन त्यसका बारे अनुसन्धान हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
प्रोफेसर बल भन्छन्, “एक पटक सङ्क्रमण फैलिसकेपछि सावधानीका लागि समेत कुन प्रजातिको जनावरबाट फैलियो भनेर जान्न महत्वपूर्ण छ।’’
पछिल्ला वर्षहरूमा मानिस जङ्गली जनावरबाट आएका थुप्रै प्रकारका भाइरससँग सम्पर्कमा आएका छन्। केही वर्ष अगाडि इबोला, एचआईभी, सार्स र अहिले कोरोना भाइरस।
प्रोफेसर जोनासका अनुसार मानव जातिले उनीहरूको जीवन अतिक्रमण गर्दै गएपछि आएका परिणामहरू हुन्। उनी भन्छन्, 'सम्पूर्ण परिदृश्यमै परिवर्तन हुँदैछ। हालसालैका वर्षहरूमा मानिसहरू नयाँ भाइरसहरूको सम्पर्कमा जसरी आएका छन् यस्तो विगतमा पहिला कहिल्यै भएको थिएन।'
वन्यजन्तुका संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अभियन्ताका अनुसार चमेरा विषाणुका स्रोत भए पनि तिनीहरू इकोसिस्टमका लागि अपरिहार्य छन्।
उनीहरु भन्छन्, “चमेरोले कीरा फट्याङग्रा ठूलो सङ्ख्यामा खाने गर्छ। तिनीहरूले लामखुट्टे र बालीलाई हानी गर्ने कीराहरू समेत खाने गर्दछन। फलफूलका रूखमा परागकण स्प्रे गरेर यसले बीउ समेत फैलाउने काम गर्दछ। रोग नियन्त्रण गर्न तिनीहरूलाई मार्न आवश्यक छैन।
चीनमा सन् २००२-३ मां सार्स भाइस पछि अहिले कोरोना भाइरस फैलिएको हो। सार्स फैलिएपछि उक्त समयमा वन्य जन्तुका बजारमा अस्थायी रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
तर, सार्स भाइरस नियन्त्रणमा आएसँगै चीन, भियतनाम तथा दक्षिण पूर्वी एशियामा वाइल्ड एनिमल मार्केट सञ्चालनमा आएका थिए।
चीनले अहिले फेरि अर्को पटक वन्यजन्तुको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। वन्यजन्तुको कारोबार मुख्य रुपमा मासु तथा औषधीका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। समाचारमा जनाइए अहिलेको प्रतिबन्ध भने अब सदाका लागि हुने छ।
हामीलाई रोग फैलिने कारण र हजारौं मानिसको मृत्युको जिम्मेवार को हो भनेर थाहा नहुन सक्छ। प्रोफेसर डायना बेल भन्छिन्, 'हामी सतर्क हुन्छौँ भने भविष्यमा फैलनसक्ने खतरनाक भाइरसबाट बच्न सक्छौं।'
कोरोनाले विश्व महामारीको रुप लिएको घोषणा गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको नाम 'कोभिड-१९' राखेको छ।
कोरोनाभाइरस पदावलीले एउटा भाइरसलाई मात्रै नभएर अहिले फैलिएको समेत विभिन्न विषाणुको समूहलाई जनाउँछ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गत बर्षको डिसेम्बर ३१ मा उक्त रोग फैलिएको औपचारिक सूचना पाएको थियो।
चीनमा भाइरस फैलिएको एक महिनापछि मात्रै उक्त भाइरसबारे जानकारी मिलेको बताइने गरिन्छ।
चीनले सुरुमा लुकाउन खोजेपछि एक चिकित्सकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विश्व समुदायलाई जानकारी दिएका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई सुरुमै जानकारी नदिएर घात गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।